Fengshui (2018) | MM Movie Store
ဖုနျးရှပေညာရပျအရ မင်ျဂလာမွဟော လူသားတှရေဲ့ကံဇာတာကို တိုးတကျစဖေို့ မြားစှာကူညီပေးတယျဆိုတာကိုတော့ တျောတျောမြားမြားကွားဖူးကွမှာပါ။
ဒီကားလေးထဲမှာတော့ အထကျတနျးစားမြိုးနှယျဖွဈတဲ့ ကငျမြိုးနှယျစုဟာ မိမိတို့ အလိုပွညျ့ဖို့ ဖုနျးရှပေညာနဲ့ မွရေဲ့စှမျးအားတှကေို မသမာတဲ့နညျးလမျးနဲ့အသုံးပွုကွသူတှဖွေဈပွီး သူတို့လမျးမှာ ဝငျနှောငျ့ယှကျသူတှကေိုလညျး ရှငျးပဈဖို့ဝနျမလေးတဲ့သူတှပေါ။
တိုငျးပွညျအပျေါသစ်စာစောငျ့သိတဲ့ သာမာနျဖုနျးရှပေညာရှငျလေး ပတျဂဆြေနျး ကတော့ အမတျကွီးရဲ့မကျြမုနျးကြိုးခံရပွီး မိသားစုကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီးနောကျ ကငျမိသားစုရဲ့ မသမာမှုတှကေို တားဆီးဖို့ကွိုးစားရငျး ဖုနျးရှပေညာကို လူသားတှအေကြိုးအတှကျသာအသုံးပွုခငျြသူပဲဖွဈပါတယျ။
မွစှေမျးအားကို အသုံးပွုပွီး တျောဝငျမိသားစုကို ကွိုကျသလို ခွယျလှယျနတေဲ့ ကငျအမတျကွီး အုပျစိုးမှုအောကျမှာ ရူးခငျြယောငျဆောငျခဲ့ရတဲ့ ဟုနျဆိုးမငျးသားတဈယောကျ သူ့ရဲ့အပေါငျးအပါတှနေဲ့အတူ တူတျောမငျးကွီးကို ကူညီရငျး ဖုနျးရှပေညာရှငျလေးနဲ့ ပူးပေါငျးမိကွပါတယျ။
သူကိုယျတိုငျ အနှိမျခံတျောဝငျခှေးအဖွဈနဲ့ ကွီးပွငျးခဲ့ရတဲ့ ဟုနျဆိုးမငျးသားတဈယောကျ မြိုးဆကျနှဈဆကျ မငျးဖွဈစနေိုငျတယျဆိုတဲ့ မွစှေမျးအားကို တပျမကျမိတဲ့အခါမှာတော့….
ဂြိုဆှနျးပွညျကွီး ဘယျလို အဖွဈအပကျြတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့မှာလဲ… ? ဆိုတဲ့ အဖွဈအပကျြလေးတှကေို ဒီကားလေးထဲမှာ ပရိသတျကွီး စိတျဝငျတစားကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ…..
ဒီလို မငျးမြိုးနှယျတှရေဲ့ အရှုပျအထှေးတှကွေား နာမညျကွီး မငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ Moon Chae-won ကလညျး ဒီကားလေးထဲမှာ ဖခငျအတှကျ လကျစားခဖြေို့ ကွိုးစားနသေူ ဂဟောမယျခေါငျးဆောငျ ခြိုဆနျးအဖွဈ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသေးပါတယျနျော….
ပညာရှငျ ပတျဂဆြေနျး အဖွဈ Cho Seung-wooဟုနျဆိုးမငျးသားအဖွဈ Ji Sungခြိုဆနျးအဖွဈ Moon Chae-won တို့က ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ
ဖုန်းရွှေပညာရပ်အရ မင်္ဂလာမြေဟာ လူသားတွေရဲ့ကံဇာတာကို တိုးတက်စေဖို့ များစွာကူညီပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ တော်တော်များများကြားဖူးကြမှာပါ။
ဒီကားလေးထဲမှာတော့ အထက်တန်းစားမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ ကင်မျိုးနွယ်စုဟာ မိမိတို့ အလိုပြည့်ဖို့ ဖုန်းရွှေပညာနဲ့ မြေရဲ့စွမ်းအားတွေကို မသမာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုကြသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့လမ်းမှာ ဝင်နှောင့်ယှက်သူတွေကိုလည်း ရှင်းပစ်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့သူတွေပါ။
တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာစောင့်သိတဲ့ သာမာန်ဖုန်းရွေပညာရှင်လေး ပတ်ဂျေဆန်း ကတော့ အမတ်ကြီးရဲ့မျက်မုန်းကျိုးခံရပြီး မိသားစုကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက် ကင်မိသားစုရဲ့ မသမာမှုတွေကို တားဆီးဖို့ကြိုးစားရင်း ဖုန်းရွှေပညာကို လူသားတွေအကျိုးအတွက်သာအသုံးပြုချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြေစွမ်းအားကို အသုံးပြုပြီး တော်ဝင်မိသားစုကို ကြိုက်သလို ခြယ်လှယ်နေတဲ့ ကင်အမတ်ကြီး အုပ်စိုးမှုအောက်မှာ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ ဟုန်ဆိုးမင်းသားတစ်ယောက် သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေနဲ့အတူ တူတော်မင်းကြီးကို ကူညီရင်း ဖုန်းရွှေပညာရှင်လေးနဲ့ ပူးပေါင်းမိကြပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင် အနှိမ်ခံတော်ဝင်ခွေးအဖြစ်နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ဟုန်ဆိုးမင်းသားတစ်ယောက် မျိုးဆက်နှစ်ဆက် မင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မြေစွမ်းအားကို တပ်မက်မိတဲ့အခါမှာတော့….
ဂျိုဆွန်းပြည်ကြီး ဘယ်လို အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာလဲ… ? ဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ဒီကားလေးထဲမှာ ပရိသတ်ကြီး စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်…..
ဒီလို မင်းမျိုးနွယ်တွေရဲ့ အရှုပ်အထွေးတွေကြား နာမည်ကြီး မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Moon Chae-won ကလည်း ဒီကားလေးထဲမှာ ဖခင်အတွက် လက်စားချေဖို့ ကြိုးစားနေသူ ဂေဟာမယ်ခေါင်းဆောင် ချိုဆန်းအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသေးပါတယ်နော်….
ပညာရှင် ပတ်ဂျေဆန်း အဖြစ် Cho Seung-wooဟုန်ဆိုးမင်းသားအဖြစ် Ji Sungချိုဆန်းအဖြစ် Moon Chae-won တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်